गन्तब्य नेपाल न्युज :: शिक्षा
विद्यालय जान दैनिक ६ किलोमिटर हिँड्नुपर्ने बाध्यता
व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट विद्यार्थी सम्मानित
मोतिरामको कथा :अध्याँरोबाटो उज्यालोतर्फ
अल्फा बिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर भोली हुँदै
एसइइ पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन, परीक्षा भदौ १ मा हुने
असार २२, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन गरेको छ । यस अघि साउन २६ र २७ लाई तय गरिएको पुरक परीक्षा सरेर अब भदौ १ मा हुने भएको छ ।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिइएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने
७ चैत्र, काठमाडौँ । विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको छ ।
म्याग्दीबाट दुई हजार २४२ विद्यार्थीहरु एसईई परीक्षामा सामिल हुँदै, ३१ जना वञ्चित
४ चैत्र, म्याग्दी । sम्याग्दीमा हाजिरी नपुगेका कारण ३१ विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिन नपाउने भएका छन् । पचहत्तर प्रतिशत हाजिरी नपुगेका कारण आगामी हप्तादेखि शुरु हुने एसइईमा सहभागी हुन नपाउने भएका हुन् ।
दमौली । व्यावसायिक धारको पढाइ शुरु भएका तनहुँका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । छोटो समयको पढाइबाट रोजगार सुनिश्चित हुने भएपछि विद्यार्थीहरु प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
एमएस्सी पशु विज्ञान विषयको भर्ना रद्द
चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायले स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरेको छ।
सरकारले दिँदै आएको खाजा कटौती, विद्यालय जान छाडे चेपाङ बालबालिका
इतिहास पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इतिहास अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केन्द्रीय विभागमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या शून्यमा झरेपछि इतिहास अध्ययनप्रति विद्यार्थीहरुको रुचि जगाउन विभागले यथासम्भव छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो।
लमजुङ । गाउँघरका मानिस सहर पसेसँगैँ खाली जस्तै भएको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा विद्यार्थी आउँन थालेका छन् ।
अत्यधिक चिसो भएपछि १७ हजार विद्यार्थी पढ्ने १५१ विद्यालय फागुनसम्म बन्द
हुम्ला । अत्यधिक चिसोका कारण सोमबारदेखि जिल्लाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय ४५ दिनका लागि बन्द भएका छन् ।
बर्दिया । बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा रहेको जन ज्योती आवासिय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा अध्यनरत विद्यार्थीअरुले हावाबाट चल्ने साइकल निर्माण गरेका छन् । यसरी गुलरियामा र विद्यार्थीहरुले हावाबाट चल्ने साईकल निर्माण गरेपछि गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले अवलोकन गरेका छन् ।
विद्यालय तहमै चिनियाँ भाषा पढ्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा चिनियाँ भाषा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय तहको शिक्षामा चिनियाँ भाषा पनि पठनपाठन गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। चीनमा अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको समृद्धिमा चिनियाँ सहयोग वृद्धि गर्न त्यहाँ अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरू सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
विद्यालयका लागि छ लाखको जग्गा
जाजरकोट। नलगाड नगरपालिका–३ कैनाबजारका चार अभिभावकले सूर्योदय माध्यमिक विद्यालयका लागि जग्गा खरिद गरेका छन् ।
परीक्षाको सूचना अब टेलिफोनबाटै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्याथीहरुले आउँदो दिनहरुमा आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै सूचना टेलिफोनबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।
श्री भवानी प्राथमिक विद्यालयमा थप दुई कोठाको पुस्तकालय निर्माण हुने
गोरखा । विनाशकारी भूकम्प पश्चात् पुनर्निर्माण हुँदै गरेको भिमसेन थापा गाउँपालिका ८– बोर्लाङ (ऐरिभन्ज्याङ) स्थित श्री भवानी प्राथमिक विद्यालयमा थप दुई कोठाको पुस्तकालय निर्माण हुने भएको छ ।
त्रिवि विश्वका उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको छ।
पाल्पा । अभिभावक गुमाएका एकै घरका तीन दाजुभाइले रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–४ को सहयोगमा विद्यालय गएर पढन पाएका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय सल्लेरी प्राविमा शिशु कक्षामा भर्ना गरिएको छ ।
पोखरा । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको किवानिज इन्टरनेशनल नेपालको तीन दिने शैक्षिक सम्मेलन शुरु भएको छ ।
जनकपुरधाम । भारतको ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगाले धनुषाका रामसागर पण्डितलाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरेको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय कार्यशाला राजधानीमा सुरुः पाँच देशका विद्यार्थीहरु सहभागी
काठमाडौ । दक्षिण एसियाली जलश्रोत क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु भएको छ । गोष्ठीमा नेपालसहित बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र क्यानेडेली विद्यार्थीहरु गोष्ठीमा सहभागी छन् ।
काठमाडौँ । कनिष्ठलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणी शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकहरुले कक्षा बहिष्कार गरेका छन् ।
दशवटा विद्यालयलाई प्राविधिक कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति
दाङ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले दाङका दशवटा सामुदायिक विद्यालयलाई यसपटक प्राविधिक कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ ।
आमाछोरो एकैसाथ एसइई उत्तीर्ण
भक्तपुर । विद्यालय जान झोलामा किताब र कापी बोकेर हिँड्दा ६३ वर्षकी तुल्सीमाया श्रेष्ठलाई धेरैले गिज्याए । मध्यपुरथिमि नगरपालिका ४ गठ्ठाघरमा बस्दै आउनुभएकी उहाँले अठोट गर्नुभयो – जीवन रहुन्जेल पढेरै छोड्छु ।
तीन छोरी र एक छोराकी आमा उहाँको अठोटले यसवर्ष सार्थकता पायो । त्यसरी भन्नेहरुका सामु उहाँले एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गरेर देखाइदिनुभयो सि ग्रेड नै भए पनि । विद्यालय जान घरबाट तुल्सीमाया निस्किँदा मुख खुम्चाउने छिमेकीहरुका अगाडि उहाँ अहिले उदाहरण बन्नुभएको छ ।
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ ।
महेन्द्रनगर । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले खुला विश्वविद्यालय आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति सरकारले नयाँ योजना बनाइरहेको बताउनुभएको छ ।
आजबाट इक्यान शैक्षिक मेला
पाल्पा । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्रदान गर्न थालेका छन्।
तारकेश्वरको श्री संखादेवी माविमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान
काठमाडौं । नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाँउपालिका वडा ५ कल्लेरीमा रहेको श्री संखादेवी माध्यामिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने
काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौ । शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन विरुद्घ त्रिवि क्याम्पस कीर्तिपुरमा कात्तिक १७ गते पुष्कर शर्माको संयोजकत्वमा तर्दथ समिति गठन भएकको थियो । सोहि समितिद्वारा ओयोजित कात्तिक १९ गते प्रा.डा. विद्यानाथ काईरालाको प्रम्ख आतिथ्यमा वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो, भने सोहि दिन हजारोँ विद्यार्थीले त्रिवि परीसरमा वृहत ¥याली प्रदशन गरेका थिए ।
काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यमान आधार (मापदण्ड)मा सामान्य परिवर्तन गरेको छ। शिक्षामन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट केही विषयमा पढ्न विगतमा लागू गरिएको स्तरीकृत अङ्क (जिपिए)का आधारमा सामान्य परिवर्तन भएको हो।
असार २, भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले यस वर्षको ​एसइई परीक्षाको नतिजा शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिले ‘शिक्षा नियमावली, २०७३’ पारित गरेको छ । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले उक्त नियमावली पारित गरेको हो । शिक्षा ऐन (२०२८) आठौं संशोधन जारी भएको दश महिनापछि बल्ल नियमावली जारी गरिएको हो ।
फागुन २०, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षा तालिका परिवर्तन गरेको छ। वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावका कारण परीक्षा पछि सारिएको बोर्डले जनाएको छ।
फागुन १९, काठमाडौं । एसएलसी परीक्षामा कम्तीमा ‘सी’ ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थी मात्रै लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
डा. गोबिन्द केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरुले भोलीबाट इमर्जेन्सीबाहेक अन्यत्र काम नगर्ने
असोज १७, काठमाडौं । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का आवासीय चिकित्सकहरुले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा मंगलबारबाट ओपीडी लगायतमा काम नगर्ने भएका छन् । आकस्मिक र शल्यक्रियामा भने काम जारी राख्नेछन् । डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै चासो नदिएको नेशनल रेसिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसनले जनाएको छ । एशोसिएसनका अनुसार आईओएमका आवासीय चिकित्सकहरु आइतबारदेखि नै पठनपाठनमा सहभागी भएका छैनन् । मंगलबारबाट शैक्षिक कार्यक्रम अन्र्तगतका अपरेशन (ओटी) र इमर्जेन्सी बाहेकका काममा सहभागी नहुने उसले बताएको छ । एशोसिएसन
डा. केसीका माग बारे सरकारी वार्ता समितिले आजबाट वार्ता गर्ने
श्रावण ६, काठमाण्डौ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै १२ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनाएको समितिले आजदेखि काम सुरू गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा सरकारले बुधबार वार्ता समिति गठन गरेको हो । डा. उप्रेतीका अनुसार अहिले समितिका सदस्यहरूबीच बैठक सुरू भएको छ । यो बैठकले डा. केसीसँग वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा प्रतिनिधि माग गर्ने छ । यस्तै बैठकले वार्ताको ’मोड़ालिटी’ समेत तय गर्ने छ । चिकित्सा शिक्षामा विभिन्न सुधारको माग
बालुवाटार घेराउ गर्न गएका डा. केसीका समर्थक प्रहरी नियन्त्रणमा
श्रावण ४, काठमाण्डौ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै दश दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका १२ जना समर्थकहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । अनसनको दशौं दिनसम्म पनि सरकारले पूर्ण वेवस्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका डा. केसीका समर्थकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । डा. केसीको समर्थकहरू शिक्षण अस्पतालबाट नै नाराबाजी गर्दै बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटार पुगेर १५–२० मिनेट नाराबाजी पछि निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेका थि
असार २५,काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दक्ष एवम् शिक्षित जनशक्ति तयार गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयको छलफलमा सांसदले
अनिवार्य विषयका किताब अभाव
सार १९, काठमाण्डौ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ११ र १२ कक्षामा निश्चित पाठ्यपुस्तक लागू नगरिएको जनाएको छ । तर, केही उच्चमावि र त्यहाँका शिक्षकले निश्चित प्रकाशन तथा लेखकका पुस्तक अनिवार्य गरेपछि शिक्षा कार्यालयले त्यस्तो अवस्था नरहेको जनाएको हो । शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माका अनुसार अनिवार्य नेपाली बाहेक अन्य विषयमा कुनै निश्चित पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको छैन । केही उच्चमावि र शिक्षकले निश्चित प्रकाशन र लेखकको पुस्तक अनिवार्य गरेको गुनासो आएको उनले बताए । उनले सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षकले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमसँग मिल्ने विषयवस्तु समेटिएका र सूचीकृत गरिएका आधिकारिक पाठ्यपुस्तकको सूची उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन्
उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् खारेज
असार १६, काठमाडौं । उच्च माध्यामिक शिष परिषद् खारेज भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण गरेपछि औपचारिक रुपमै परिषद् खारेज भएको छ ।
असार ४, काठमाडौं । प्रवेशिका परीक्षामा अनिवार्य अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा ‘सी’ वा सोभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क औसत २।० ल्याउने विद्यार्थीले प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटी् ले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फको विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सिटीइभिटीका सदस्य सचिव डा रामहरि लामिछानेले भन्नुभयो, “अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा ‘सी’ श्रेणी आएको छ भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यतर्फको विषय अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेका छाँै ।”
डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले मौका परिक्षा दिन पाउने
असार १, काठमाडौं । एसएलसीमा दुई विषयमा ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड प्राप्त गर्नेले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षा बोर्डले ‘ग्रेड वृद्धि’का निम्ति यो निर्णय गरेको जनाएको छ । ‘बढीमा दुई विषयमा डी र ई ग्रेडप्राप्त विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि गर्न मौका परीक्षा दिने निर्णय भएको छ
गाउँमै इन्जिनियरिङ्ग कक्षा उपलब्ध
जेठ १६,काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकका युवाहरुले उच्च शिक्षा अध्यन गर्नको लागि अब जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सिन्धुपाल्चोकको थुम्पाखर गा.वि.स मा रहेको महेन्द्रोदय उच्च मा.वि ले सिभिल इन्जिनियरिङ्गको कक्षा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शिक्षामा प्रबिधी र मानवीय संवेदना समावेश हुनु पर्छ :शिक्षा मन्त्री पोखरेल
जेठ १४, भक्तपुर । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई सीप, प्रविधि र मानवीय संवेदनासँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार भक्तपुरको गठ्ठाघरमा आस्था महिला विद्यालयको आठौ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिलेका नागरिकमा संवेदना हराउदै गएकाले शिक्षालाई मानवीय संवेदनासँग जोडेर लैजानु पर्ने बताउनुभएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले व्यावसायीक प्रविधि र रोजगारमुलक शिक्षाका लागि छुट्टै संरचना बनाउन लागेको बताउनुभयो । नीति निर्माता र सरकारी कर्मचारीले सामुदायीक विद्यालय मै आफ्ना छोराछोरी पढाउनु पर्नेमा जोड दिदै उहाँले यसो गरेमा मात्रै सार्वजनिक विद्यालयको चित्र बदलिने बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त
एसएलसी परीक्षा तयारी अन्तिम चरणमा
परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले जनायअनुसार यस बर्षको एसएलसी परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।आगामी चैत्र १८ बाट सन्चालन हूने परीक्षाका लागी उत्तरपुस्तीकाहरु सम्पुर्ण जील्लाहरुमा पठाइसकीयको छ। यो बर्ष देशभरीका १ हजार ४४३ परीक्षाकेन्द्र बाट करीब ७ लाख बिधार्थि परीक्षामा सामेल हुनेछन।
तनहुमा पहिलो धार्मिक महोत्सव सुरु
गन्तव्य नेपाल न्यूज/ तनहुँको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा आयोजित धार्मिक एवं शैक्षिक महोत्सव २०७२ को राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी छिन् । सात दिनेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको उद्घाटनका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले उच्चशिक्षामा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थालाई थप चुनौति थपिएको बताइन् ।
एसएलसी परीक्षा चैत १८ देखि हुने
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ एसएलसी परीक्षा आगामी चैत १८ गतेदेखि २९ गतेसम्म हुने गरी तालिका तय भएको छ । परीक्षा समितिको बुधबारको बैठकले एसएलसी परीक्षा आउँदो चैत १८ गतेदेखि २९ गतेसम्म हुने गरी तालिका तय गरेको छ । यसअघि चैत पहिलो हप्तादेखि नै एसएलसी परीक्षा सुरु हुने गर्दथ्यो ।
एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई मोबाइल एप्स र इन्टरनेटबाट पढाइने
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ कक्षा १० का विद्यार्थीहरुले अब मोवाईल एप्स तथा इन्टरनेटमार्फत पढ्न पाउने भएका छन् । सरकारले समय नमिल्ने कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर उक्त व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली (अक्षराङ्कन पद्धति) अनुसार डि र डिभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेको विद्यार्थीले कुनै दुई वा त्योभन्दा बढी विषयमा माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुनः मूल्याङ्कन गराउन चाहेमा पुनः अर्को वर्षको एसएलसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गन्तव्य नेपालन्यूज/काठमाडौँ सरकारले मुलुकमै पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी नीति बनाउने तयारी गरेको छ । सो नीति बनाउन उद्योग मन्त्रालयको पहलमा उद्योग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य सम्मिलित एक सचिव स्तरीय सुझाव समिति गठन भएको छ ।
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ एक महिनाअघिदेखि निर्माण थालिएको नुवाकोट तारुकास्थित विपी प्राविको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उक्त विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरियो । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी मोहन लम्सालको संयोजनमा स्विस नागरिक बर्नहार्ट बुलर नेतृत्वको टोलीले उक्त विद्यालयको निर्माण गरेको हो ।
सुवास भट्ट/काठमाडौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्रिविको एकचालिसौँ दिक्षान्त समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समग्र शिक्षाप्रणालीमा प्रशस्त समस्याहरु देखिएको बताउँदै शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धी हासिल गर्न सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ सरकारले अवैधानिक रुपमा देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित भारतीय विद्यालयहरु खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सिबिएसई) अन्तर्गतका अनुमती बिना सञ्चालित विद्यालयहरुले पटक –कानुनी प्रावधान नटेरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले खारेजी गर्ने तयारी गरेको हो । विभिन्न १४ वटा विद्यालय खारेज गर्न मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले त्रिविलाई बोलायो
गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ नियमविपरीत करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार अदालतमा बोलाएको छ ।
एसएलसी पूरक परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक
एसएलसी पूरक परिक्षाको परिक्षाफल बिहीबार सावृजनिक भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका अनुसार परीक्षामा ८३ हजार ७८ जना अर्थात् ६६.९३ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएकका छन् ।
कक्षा १२ को विज्ञान सङ्कायमा ७१.६५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
भदौ ११, भक्तपुर । कक्षा १२ को विज्ञान सङ्कायमा ७१ दशमलव ६५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले शुक्रवार कक्षा १२ को विज्ञान सङ्कायको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दै नियमिततर्फ ३७ हजार ९ सय ९८ परीक्षार्थी रहेकामा २७ हजार २ सय २७ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको जानकारी दिएको छ ।
पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन माग, मुद्रण महासंघद्धारा आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं, भदौ २ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा साझा र जनक शिक्षालाई दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त चेतावनी दिएको हो ।
ललितपुर, साउन २६ गते । ललितपुरको मङ्गलबजारस्थित आदर्श कन्या निकेतन अलुम्नीद्वारा गत वैशाखमा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सो विद्यालयका कक्षा कोठा मर्मतका लागि सहयोगार्थ हिजो यहाँ छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गरिने
अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका शिक्षकहरुलाई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भएको छ ।शिक्षक सेवा आयोगले २०६८ सालमा अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका शिक्षकहरुलाई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ ।
दरबार हाइस्कुल पहिलेकै स्वरुपमा निर्माण गरिने
काठमाडौँ, साउन २५ गते । सबैभन्दा पुरानो विद्यालय दरबार हाइस्कुल (भानु मावि)लाई यथावत स्वरुपमा पुनःनिर्माण गरिने भएको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरुमध्ये दरबार हाइस्कुलको नक्सा तयार गर्न थालिएको छ ।
प्यूठान, साउन २५ गते । गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापअन्तर्गत जिल्लाका १३ वटा विद्यालयमा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना भएका छन् ।
स्नातक तह द्वितीय वर्षको परीक्षा स्थगित
जुम्ला, साउन २५ गते । सङ्घीय संरचनामा कर्णालीको अस्तित्व मेट्न खोजेको भन्दै कर्णालीवासी आन्दोलित भएका छन् ।सीमाङ्कन निर्धारण गर्दा कर्णालीको अस्तित्व मेटिएको भन्दै पाँचवटै जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको संयुक्त सङ्घर्ष समिति जुम्लाले जनाएको छ ।
विद्यार्थी अभावका कारण तनहुँका अठार सामुदायिक विद्यालय बन्द
दमौली, साउन २२ गते । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा विद्यार्थी अभावका कारण तनहँुका १८ वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । संस्थागत विद्यालयतर्फको अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भई ती विद्यालय बन्द भएका हुन् ।
खानाको जोहो नहुँदा विपन्नका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्
चितवन, साउन २२ गते । विद्यालय जाने उमेर पुगेका चितवनका विपन्न वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समस्या देखिएको छ ।
शिक्षकद्धारा आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौँ, साउन २० गते । राजनीतिक दलका नेताहरुले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता जनाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
त्रिविमा चार वर्षे बीएड
काठमाडौँ, साउन २० गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षबाट शिक्षाशास्त्र विषयमा चार वर्षे स्नातक तह (बीएड)को पठनपाठन सुरु गर्ने भएको छ ।
बागलुङ, साउन १९ गते । गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग पु¥याउन बागलुङ जिल्लाका १५ वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुदान सहयोगमा चालु आवमा १५ वटा पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो ।
अष्ट्रेलियाको डिकेईन विश्वविद्यालयद्धारा नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा
साउन , काठमाडौं (अस) । विदेश अध्ययनका लागि नेपाली बिद्यार्थीको पहिलो रोजाईमा पर्ने देश अष्ट्रेलियाको डिकेईन विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीका लागि ‘भाइस चान्सलर मेरिटोरीयस छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विद्यार्थी थोरै भएका र कम दूरीमा रहेका विद्यालय गाभिंदा ४१७ विद्यालय घटे
साउन , काठमाडौँ । विद्यार्थी कम भएका र कम दूरीमा रहेका विद्यालय एक आपसमा गाभ्ने सरकारी नीतिपछि कुल विद्यालयको सङ्ख्यामा ४ सय १७ ले कमी आएको छ ।
अस्थायी शिक्षकको बिदाइका लागि ‘सहुलियतपूर्ण अवकाश’ को प्रस्ताव
असार , काठमाडौँ । लामो समयदेखि अस्थायी नियुक्तिमा कार्यरत शिक्षकका लागि सहुलियतपूर्ण अवकाश दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रिमियर कलेजले स्थापनादेखि उच्च माध्यमिक तहमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी सङ्काय सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थापना भएको १५ वर्ष अवधिमा कलेजले आईएसओ सर्टिफिकेट पाइसकेको छ । त्यस्तै, कलेजलाई बेलायतको विश्वविद्यालयले ‘बीएन प्राडा सर्टिफिकेशन बडी’ प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं । एसएलसीमा ८४ प्रतिशत ल्याई उत्तीर्ण भएकी एना महर्जन मेडिकल शिक्षासँगै पत्रकारिता पढ्ने योजनामा छिन् । उनले प्लस टूमा विज्ञान सङ्काय पढ्ने निर्णय गरेकी छिन् । मेडिकल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउने सोच राखकी उनले समयानुकूल विषयलाई ध्यानमा राखी त्यसैअनुसारको योजना बनाउने विचार गरेकी हुन् ।
स्तरीय शिक्षामा समर्पित बर्नहार्ड्ट
काठमाडौंको बल्खुस्थित बर्नहार्ड्ट कलेजले व्यवस्थापन र विज्ञान सङ्काय अध्यापन गर्दै आएको छ । १५ वर्षभन्दा लामो शिक्षण अनुभव भएका पाँचजना संस्थापकद्वारा स्थापित यस कलेजमा सबै शिक्षक पूर्णकालीन रहेको उप–प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम विष्टले बताए ।
भूकम्पपीडितलाई साउथ वेष्टर्न कलेजमा शतप्रतिशत छात्रवृत्ति
साउथ वेष्टर्न कलेजले यो वर्ष ५ सय ४० विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ मा भर्ना खुला गरेको छ । ५ वर्षअघि स्थापना भएको कलेजमा नर्सरीदेखि पीएचडी लेभलसम्मको अध्यापन हुने गरेको उपप्रधानाध्यापक हरि सिंह केसीले बताए । दिउँसो मात्र पढाइ हुने उच्चमावि तहको विज्ञान सङ्कायमा २ सय ८० जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।
कालोपुलमा रहेको जेभिएर इण्टरनेशनल कलेजले कक्षा ११ का लागि भर्ना शुरू गरेको छ । ६ वर्षदेखि सञ्चालित कलेज हरेक वर्ष ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उतीर्ण गराउन सफल रहेको उप–प्रधानाध्यापक सुजन बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘२०५७ सालमा स्थापना भएको जेभिएर इण्टरनेशनल उत्कृष्ट नतीजा र अनुशासित शैक्षिक वातावरणका लागि परिचित कलेज हो ।
असार ११, काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो रोजाइको विद्यालय बनाउनेतर्फ शिक्षा मन्त्रालय अघि बढेको बताएकी छिन् ।सरकारको लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा शिक्षामन्त्री यादवले ७५ ओटै जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय बनाउने योजना रहेको तर स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको जनाएकी छिन् ।
शिक्षा मन्त्रीलाई प्राध्यापकहरुको दबाब
शिक्षा मन्त्रीलाई प्राध्यापकहरुको दबाब काठमाडौँ, असार ७ गते । शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनसँग समन्वय गरेर गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले आज राजधानीमा गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री यादवले शिक्षा क्षेत्रमा हुने नियुक्ति शैक्षिक सङ्घ सङ्गठनको सिफारिसका आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
कक्षा ११ को परीक्षा आजबाट शुरु
असार १, काठमाडौं । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ को परीक्षा असार १ बाट शुरु गरेको छ परीक्षामा सातओटा जिल्ला बाहेकका करीव ३ लाख ५० हजार परीक्षार्थी सामेल भएको उच्चशिक्षा परिषदले जानकारी दिएको छ ।
असार पहिलो साता एसएलसीको नतिजा आउने
, भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७१ सालको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने जानएको छ ।गत वर्ष जेठ ३० गते प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको कार्यालयले यस वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्प र पराकम्पनका कारण प्राविधिक समस्या आएकाले परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न केही दिन ढिलो हुने भएको हो ।
पूर्वाञ्चलका २ हजार सामुदायिक विद्यालयमा क्षति
धनकुटा । वैशाख १२ र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका २ हजार २३ ओटा सामुदायिक विद्यालयका भवनमा क्षति पुर्याएको छ ।
बागलुङका ४५५ विद्यालयमा क्षति
बागलुङ । वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले बागलुङका ४५ प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार २ सय ४० विद्यालयमा क्षति पुगेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सुर्खेतमा साढे २५ करोडको क्षति
सुुर्खेत (अस) । भूकम्पका कारण सुर्खेतका ८५ ओटा विद्यालयमा रू. २५ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ । ९५ ओटा पूर्ण क्षति, ७२ ओटा आंशिक र तीनओटा बस्न नमिल्ने गरी १ सय ७० ओटा कक्षाकोठामा क्षति भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपा हमालले जानकारी दिइन् । विद्यालयसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तीनतले भवनका कोठाहरू चर्केकाले हाल तल्लो तलाबाट कामकारबाही सञ्चालन भइरहेको छ । पूर्ण क्षति पुगेका विद्यालयका कक्षाकोठामा अहिले त्रिपालमा राखेर पढाइ शुरू गरिएको छ । सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालयलाई निश्चित रकम दिने भनिए त्यसले कक्षाकोठा मर्मत गर्न नसकिने सम्बद्ध विद्यालयका शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, दाप्चा साजगैरा सहारेका प्रधानाध्यापक गोवद्र्धन चौधरीले त्रिपालमा पढाइ शुरू भएकाले कक्षाकोठा निर्माणका लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक भएको बताए । भूकम्पबाट प्रभावित तथा क्षति भएका विद्यालयको अभिलेख आउने क्रम अझै जारी छ । भौगोलिक कठिनाइ, गाविसको सिफारिश तथा प्रहरी मुचुल्का जस्ता प्राविधिक समस्याका कारण पूरा तथ्याङ्क आउन अझै १ महीना लाग्ने उनको भनाइ छ ।
कुम (अस) । रुकुमको खारा गाविस निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षायुक्त गाविस घोषणा गरिएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग, बालसरोकार केन्द्र रुकुमको सहजीकरण र खारा गाविस कार्यालयको आयोजनामा सो घोषणा गरिएको गाविस सचिव रुद्र देवकोटाले जानकारी दिए ।
डरका बीच आजदेखि विद्यालय सञ्चालनमा
जेठ १७, काठमाडौँ । भूकम्पका कारण बिदा रहेका विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चलनमा आएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको ‘गोरखा भूकम्प’ र वैशाख १३ र २९ गतेको शक्तिशाली परकम्पका कारण झण्डै एक महीना विद्यालय बन्द भएका थिए ।
जेठ ५, काठमाडौँ । उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले भूकम्प प्रभावित विभिन्न सात जिल्लाको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा त्यहाँको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा तय गर्ने भएको छ । परिषद्ले सोमबार ६८ जिल्लाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरे पनि भूकम्पले धेरै क्षति पु¥याएका गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थिएन ।
दोलखामा शिक्षा र स्वास्थ्यले बनाए आपत्कालीन कार्ययोजना
दोलखा । गत वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प तथा २९ गतेको शक्तिशाली पराकम्पनपछि दोलखाको जनजीवन सामान्य हुनुअगावै शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यालयले आपत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । भूकम्पले दोलखाका अधिकांश विद्यालयको भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएपछि ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ । सोहीकारण जिल्लाको शैक्षिक वातावरण बिग्रिन नदिन शिक्षा कार्यालयले आपत्कालीन कार्ययोजना अघि सारेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकबहादुर लोप्चनले बताए । दोलखामा ग्रामीण भेगका ९५ प्रतिशत विद्यालय भवनका साथै शौचालय, खानेपानीलगायत पूर्वाधार नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
जेठ १५ सम्म विद्यालय बन्द वैशाख ३० काठमाडौँ, । शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा आगामी जेठ १५ गतेसम्म पठनपाठन बन्द गराएको छ । यसअघि जेठ १ गतेदेखि पहिले विद्यार्थीलाई मनोपरामर्श दिई विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेका बेला आजको भूकम्पको धक्कापछि मन्त्रालयले विदाको अवधि थपेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालका अनुसार अति प्रभावित १४ जिल्लामा १५ गतेसम्म पढाइ बन्द गराउने र अन्य जिल्लामा क्षतिको विवरण हेरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्णय गर्नेछ । नयाँ शैक्षिक सत्र हरेक वैशाख पहिलो हप्तादेखि शुरु हुने प्रचलन छ ।
जेठबाट विद्यालय नियमित सञ्चालन
जेठबाट विद्यालय नियमित सञ्चालन काठमाडौं ९अस० । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू जेठ १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन् । भूकम्पले भौतिक तथा मानवीय क्षति भएपछि वैशाख महीनाभर सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ९५ प्रतिशत विद्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसमध्ये कतिपय भवन पूर्ण ध्वस्त भएकाले विद्यालय बन्द गर्नुपरेको एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले बताए । तर, पठनपाठन र विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर नपरोस् भनेर जेठबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
भूकम्पमा ३१ जना शिक्षकले ज्यान गुमाए
भूकम्पमा ३१ जना शिक्षकले ज्यान गुमाए काठमाडौं । भूकम्पमा परी ३१ जना शिक्षकको मृत्यु भएको शिक्षा विभागले जानकारी दिएको छ । सोमवारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार मृत्यु हुने शिक्षकहरूमा सिन्धुपाल्चोकका १२, नुवाकोटका १०, धादिङका पाँच र गोरखाका चारजना छन् । यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेकाले मृतकको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने विभागको भनाइ छ । मृत्यु भएका शिक्षकको स्थानमा अन्य शिक्षकको व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने विभागले बताएको छ ।
‘ई–लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा आएन
‘ई–लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा आएन धनकुटा । धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा ४ वर्षअघि स्थापना भएको आधुनिक विद्युतीय पुस्तकालय ९ई–लाइब्रेरी० अझै सञ्चालनमा आएको छैन । २० लाख रुपैया“ लगानीमा स्थापना भएको ई–लाइब्रेरी सञ्चालनमा नआउँदा पाठकलाई समस्या भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा सन् २०११ मै बहुमुखी क्याम्पसमा १६ थान कम्प्युटर र इण्टरनेट उपकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । ई–लाइब्रेरी सञ्चालनमा नआए पनि इण्टरनेटबापत वार्षिक १ लाख ८ हजार रुपैयाँ नेपाल टेलिकमलाई बुझाउँदै आएको क्याम्पस प्रमुख निरञ्जन वस्तीले बताए ।
विद्यार्थीलाई खेलको माध्यमबाट पढाउन ः जिशिका गोरखाको निर्देशन
गोरखा । बाल विकास कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई खेलको माध्यमबाट सिकाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गोरखाले निर्देशन दिएको छ । चक, डष्टरमा केन्द्रित शिक्षण सिकाइ विधिभन्दा खेल तथा सङ्गीतका माध्यमबाट पढाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । ‘किताबको पाठ जस्ताको त्यस्तै घोकाएर सिकाइ उपलब्धि हासिल हुँदैन,’ सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी नवराज पौडेलले भने, ‘खेल खेलाउँदै पढाउँदा सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ । र, विद्यार्थीले पनि विषयवस्तुबारे छिट्टै बुझ्छन् ।’ ।
टिभी नहेर्ने विद्यार्थीको भन्दा दुई घन्टासम्म टिभी हेर्नेको सिकाइ उपलब्धि राम्रो चैत १९, भक्तपुर । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१३ को मस्यौदा प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परीक्षण केन्द्रका सहसचिव लेखनाथ पौडेलले नेपाली विषय सामान्य मात्र तथा गणित र विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेको पाइएको बताए । औसत सिकाइ उपलब्धि नेपालीमा ४८ प्रतिशत, गणितमा ३५ प्रतिशत र विज्ञानमा ४१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने गणितमा शिक्षण सिकाइ उपलब्धी न्यून रहेको छ ।